सिएम रीप कम्बोडिया - स्थान, होटलहरू, मौसम, एयरपोर्ट, गर्न केहि चीजहरू
सीम रीप, कम्बोडिया
सिएम रीप उत्तर पश्चिमी कम्बोडियामा सीम रीप प्रान्तको राजधानी शहर हो। यो एक लोकप्रिय रिसोर्ट सहर र Angkor क्षेत्र को लागी एक प्रवेशद्वार हो।
सीम रप आज एक लोकप्रिय पर्यटन गन्तव्यको रूपमा धेरै होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, र व्यवसाय पर्यटन संग नजिकको सम्बन्धित छ। यो कम्बोडियामा सबैभन्दा लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण, आk्कोर मन्दिरहरूसँगको निकटतामा रहेको छ।
कहाँ छ Siem कटनी?
Siem Rap, आधिकारिक रूपमा Siemreap कम्बोडिया को एक प्रान्त हो, उत्तर पश्चिम कम्बोडिया मा स्थित छ। यसको उत्तरीमा ओडार मिन्चे, पूर्वमा प्रीह विहार र कम्पो Th थोम, दक्षिणमा बट्टम्बang र पश्चिममा बान्टे मिन्चे प्रान्तहरू पर्छन्। यसको राजधानी र सबैभन्दा ठूलो शहर सिएम रीप हो। यो कम्बोडियाको प्रमुख पर्यटन केन्द्र हो, किनकि यो अ Ang्गकोरको विश्व प्रसिद्ध मन्दिरहरूको नजिकको शहर हो
किन Siem रीप भ्रमण?
हरियो, जीवन शैली र संस्कृति को लागी। तर सीम रीपमा आउनुको मुख्य कारण 162.6 हेक्टेयर मापन साइटमा, संसारको सबैभन्दा ठूलो धार्मिक स्मारक, Angkat Wat को भव्य मन्दिरहरूको भ्रमण गर्नु हो। मूल रूपमा Khmer साम्राज्य को लागी भगवान विष्णु को समर्पित एक हिन्दू मन्दिर को रूप मा निर्माण, यो बिस्तारै 12th शताब्दीको अन्त तिर बौद्ध मन्दिर मा रूपान्तरण भयो।
के सीम रीप सुरक्षित छ?
कम्बोडियामा सिम रीप सायद सुरक्षित गन्तव्य हो। यो एक पर्यटक आकर्षण केन्द्र बन्यो र तदनुसार पूरा गर्दछ। यद्यपि क्षुद्र अपराध दुर्भाग्यवश असामान्य छैन, यदि कसैको बारेमा उनीहरूको बुद्धिमत्ता छ भने एक सुरक्षित हुन्छ।
सिएम रीपमा कति समय बस्नु पर्छ?
Siem Rap एक दिन मा कभर गर्न सकिदैन। तपाईलाई कम्तिमा तीन वा चार दिनको आवाश्यक हुन्छ Angkor मन्दिरको विशाल क्षेत्र र क्षेत्र मा अन्य आकर्षण कवर गर्न।
कहिले सीम रीप भ्रमण गर्ने?
उत्साही ट्राभल एजेन्टहरूले तपाइँलाई भन्नेछन् सीम रीप भ्रमण गर्न कहिल्यै खराब समय हुँदैन। कुन प्रकारको सत्य हो, जबसम्म तपाई यहाँ लचिलो हुनुहुन्छ कि तपाइँ आफ्नो समय कसरी व्यतीत गर्नुहुन्छ यहाँ आउनुहुन्छ।
सुख्खा मौसम डिसेम्बर देखि अप्रिलसम्म चल्छ, जबकि मेदेखि नोभेम्बरसम्म मानसूनले ओसिलो मौसम र उच्च आर्द्रता दिन्छ।
सिमे रीप भ्रमण गर्न उत्तम समय डिसेम्बर र जनवरीमा हो, जब दिन निश्चित रूपमा घाम र सुक्खा हुन्छन्। केवल सचेत हुनुहोस् कि यो चोटीको पर्यटन मौसम हो, त्यसैले तपाईले जताततै यस्तो भीडलाई फेला पार्नुहुनेछ र मूल्य अधिक हुनेछ।
सीम रीपबाट समुद्री तट कति टाढा छ?
सीम रीपको कुनै समुद्रीतट छैन। कम्बोडियाको समुद्री तटहरू अक्सर थाईल्यान्डको पक्षमा उपेक्षित हुन्छन्। तर बिस्तारै, निस्सन्देह, देशको आइडिलिक टापु र सिहानोकभिलको चम्किलो सेतो बालुवा संसारका समुद्र तट प्रेमीहरूको लागि परिचित भैरहेछन्।
सिएम रीपबाट सिहानोकभिलसम्मको दूरी सडक मार्फत 532km (350 माईल) वरपर छ। यो लामो दूरीको स्थानान्तरण (10-15 घण्टा सडकबाट) को कारणले हो कि धेरै यात्रीहरूले सिहानोकभिले यात्रा नगर्न रोजे। सब भन्दा द्रुत विकल्प विमान लिनको लागि हो, जुन 1 घण्टा लाग्छ।
सिएम रीप बनाम नोम पेन्ह
कम्बोडियामा दुई लोकप्रिय गन्तव्यहरूको बीचमा, सेम रीप सेवानिवृत्त हुने राम्रो ठाउँ जस्तो देखिन्छ। जबकि नोम पेन्हले रूपान्तरणको प्रतिनिधित्व गर्दछ, सिएम रीपले संरक्षणको सार प्राप्त गर्दछ। वाणिज्यिक अवसरहरूको हिसाबले नोम पेन्हको तुलनामा सीम रीप बैकवाटर गाउँ जस्तो देखिन सक्छ।
फोमम पेन्हमा सीम रीप गर्नुहोस्: 143 माईल (231 किमी)
नोम पेन्हबाट सीम रीप यात्रा गर्दा तपाईंसँग4फरक विकल्पहरू छन्:
तपाईं बस लिन सक्नुहुनेछ - hours घण्टा
केहि अधिक खर्च गर्नुहोस् र ट्याक्सी लिनुहोस् - hours घण्टा
एक उडान बुक गर्नुहोस् - minutes० मिनेट
Tonle Sap Lake-4लाई6घण्टा पार गर्ने डु fer्गा लिनुहोस्
थाईल्याण्डमा सीम रीप
बैंकॉक यात्रा दूरी लगभग 400 किलोमिटर छ।
यी शहरहरू बीच केही विश्वसनीय बस कम्पनीहरू सञ्चालन, र तपाईं लिन सक्नुहुन्छ:
सीमे रीपबाट बैंककको सिधा बस। (6 देखि 8 घण्टा)
एउटा उडान बुक गर्नुहोस् - १ घण्टा
भियतनाममा सीम रीप
साईगोनबाट सीम रीपसम्मको यात्रा भूमिबाट लगभग 600 किमी छ।
हो ची मिन्ह बाट तपाईं यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ:
बस द्वारा (१२ - २० घण्टा, नोम पेन्हमा स्टपओभरमा निर्भर गर्दछ)
तपाईं सिधा उडान बुक गर्न सक्नुहुनेछ (1 घण्टा)
त्यहाँ सयौं छन् होटल सिएम रीपमा। परम्परागत वा आधुनिक, सानो वा असीमित बजेटको लागि, गेस्ट हाउसबाट5तारे होटल सम्म, सबैजना खुशी पाउन सक्दछन्।
सीम रीप एयरपोर्ट
सीम रीप एयरपोर्ट कोड: गणराज्य
एयरपोर्टबाट एk्ग्कोर वाट: 17 मिनेट (5.8 किमी) एयरपोर्ट रोड हुँदै
एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रमा: २० - २ minutes मिनेट (१० किमी)
शहरको केन्द्रको लागि सीएम रीप एयरपोर्टबाट 9km दूरी यात्रा गर्दा तपाईंसँग3विकल्पहरू छन्:
एक मोटरसाइकल ट्याक्सी